U-Sonos utyhile iKhithi yokutshintsha i-Battery kwi-Sonos Move | Iindaba zeGajethi
UPaco L Gutierrez | | Izithethi, Iziphaluka
Kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo uphawu lwesandi oludumileyo Sonos lubonise into eyenze bonke abathengi bayo bonwaba kakhulu, abanye Ukutshintsha iikiti zebhetri kwizithethi ezibalaseleyo zeSonos. Ikhithi elula ukuyifaka kwaye eya kusombulula kwangoko iingxaki ezinokubakho zebhetri esiziphetheyo. Oku akuqhelekanga ngesiqhelo kwizithethi ezingenazingcingo, kodwa kwimeko ye-Sonos amaxabiso ayo ayiqhelekanga nayo. Ke abo batyala imali yabo bayakuxabisa ukukwazi ukwandisa ubomi bezixhobo zabo.
Le khithi ibandakanya yonke into oyifunayo ukubuyisela ibhetri ngaphandle kwemfuneko yezinye izixhobo ezongezelelweyo, ke nabani na uya kuba nakho ukuyenza ngaphandle kwengxaki. Kwiphakeji sifumana into efana kakhulu nokukhetha ikatala esinokuthi siphakamise ngayo isiciko sokukhusela, uhlobo lwe-T oluya kusinceda sikhulule izikrufu, izikere ezi-2 zokulondoloza kwaye ngokufanelekileyo ibhetri enomthamo ofanayo nowasekuqaleni.
Ibhetri yokwandisa ubomi be-Sonos Move yethu
U-Sonos ukhuphele le khithi yokubuyisela indawo eyi- $ 79 kwaye iyafumaneka ngemibala efanayo nesithethi esingenantambo sikaSonos. Kwiwebhusayithi yakho igosa siza kuyibona yonke ikhathalogu yakho esele ixhonywe kuyo ibhetri yokutshintsha ibhetri. Qaphela ukuba ukuhanjiswa kwale khithi yokubuyisela kukhululekile kwivenkile yayo esemthethweni. Ukubaluleka kwezi ndaba kukhulu kakhulu, kuba bekukho abasebenzisi abaninzi abathi ibhetri ibona ukuthotywa ukuba lowo uza ngaphakathi uhlupheke, into eyenzeka kuzo zonke izixhobo, ngakumbi kwii-smartphones.
Ibhetri ineenkcukacha ezifanayo ncam nezoqobo, kunye nokuzimela kweeyure ezili-11 eziya kuxhomekeka kakhulu kumthamo, ubushushu okanye umgama kwisixhobo esikhupha, ngaphandle kwamathandabuzo iindaba ezimnandi. Ukuba ufuna ukubona uhlalutyo lwethu olunzulu lwe-Sonos Move, cofa kule khonkco, apho sayivavanya ngokupheleleyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Iikhompyuter » Iziphaluka » U-Sonos utyhile ikhithi yokubuyisela ibhetri kwi-Sonos Move
Ingqungquthela yevidiyo elandelayo ye-Logitech Rally Bar